Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Gunnar Solskjaer Oo Wax Laga Waydiiyay Raphael Varane, Chelsea Oo Iibineysa Timo Werner Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Gunnar Solskjaer oo wax laga waydiiyay Raphael Varane, Chelsea oo iibineysa Timo Werner iyo Qodobo kale
July 19, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Roma oo noqotay kooxdii ugu dambeysay ee xiise u muujisa laacibka kooxda Villarreal ee Alfonso Pedraza. Calciomercato.it
Bayern Munich ayaa la xiriirtay Barcelona si ay u weydiiso qiimaha ay ku dooneyso daafac la aaminsan yahay inuu yahay Sergino Dest. Mundo Deportivo
Da’yarka kooxda Liverpool Ethan Ennis ayaa qarka u saaran inuu ka tago kooxda Liverpool kadib markii uu iska diiday heshiis cusub. Liverpool Echo
Carlo Ancelotti ayaa doonaya inuu Diogo Dalot keeno Real Madrid isagoo ka imaanaya kooxda Manchester United. sida uu qoray Mundo Deportivo
Roma ayaa dalab fiican ka gudbineysa garabka kooxda Palmeiras ee Matias Vina. Sky Sport
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay amaah kulasoo wareegi karto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lille Renato Sanches xagaagaan. Sida laga soo xigtay AS
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa diiday inuu ka hadlo raadinta la sheegay ee kooxda ee ku aadan Raphael Varane markii wax laga weydiiyaydaafaca dhexe ee Real Madrid isbuucaan. Sportsmole
Atletico Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso inay sii heysato Kieran Trippier xagaagaan laakiin waxay dejisay qorshe deg deg ah haddii daafaca uu dhaqaaqo. Sida laga soo xigtay AS ,
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay raadineyso inay iska iibiso Timo Werner inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan. Sida laga soo xigtay Sky Deutschland
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay dhawaan wadahadal la furi karto Riyad Mahrez si qandaraas cusub looga saxiixo. Sida laga soo xigtay Manchester Evening News